Chọpụta ebe obibi kachasị mma na Catalonia | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | ulo, España, General
Ọ bụ ezie na ugbu a, anyị enweghị ike ịga njem, n'ezie anyị ga-aga n'oge na-adịghị anya, yabụ ọ bụ ihe dị mma ịga chọọ echiche dị iche iche iji hụ ụwa. Na nke a anyị ga-ahụ nke bụ ogige kachasị mma na Catalonia, site na nhọrọ dị mfe nke nwere ike inyere gị aka ịchọta ebe obibi na ezigbo ego na obodo a.
.Nnɛ enwere ụfọdụ ogige ụlọ ọrụ na-enye anyị ụdị nkasi obi niile, ya mere na ọ bụghịzi ebe obibi nke na-apụta nanị maka ọnụahịa ya dị mma, mana ọ bụ ezigbo nhọrọ mgbe ị na-achọ ebe obibi. Anyị ga-ahụ nke bụ ogige kachasị mma na Catalonia ma ọ bụrụ na ọ bụ ebe ọzọ ị ga-aga.
1 Rhodes na-ama ụlọikwuu
2 Bougalows na-ama ụlọikwuu
3 Ogige Nautic Almata Glamping
4 Maa ụlọikwuu Prado Verde
5 La Siesta Salou Resort & Ogige
Rhodes na-ama ụlọikwuu
Ebe mara mma a mara ụlọikwuu dị na Punta Falconera, n'obodo Roses, nanị otu kilomita site n'ụsọ osimiri Santa Margarida. Ọ dị ihe dị ka kilomita iri asaa site na ọdụ ụgbọ elu Girona. Na Na mpụga ebe a mara ụlọikwuu, e nwere ebe egwuregwu na nnukwu ọdọ mmiri abụọ nwere oghere maka ebe anwụ na-acha. Ọ bụ ezigbo ebe maka ezinụlọ ma nwee ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ, ka anyị wee ghara ịchọ ọrụ ndị ọzọ. Enwere ike ịnọ na bungalows zuru oke yana ihe ịchọ mma nke oge a nke enwere ihe niile, site na ebe ezumike na kichin zuru ezu, ọtụtụ ime ụlọ ịwụ na ime ụlọ ịwụ. Ọ dịkwa nso n'akụkụ osimiri ka ị nwee ike ịnụ ụtọ ebe a ma ọ bụrụ na ịchọghị ịnọ ụbọchị na ọdọ mmiri. Maka ndị na-ahọrọ ya, enwere ohere maka ụlọikwuu n'ogige ahụ. Houseslọ maka nke ha nwere ikike ruru mmadụ isii.
Bougalows na-ama ụlọikwuu
Anyị na-aga site na mpaghara akụkụ osimiri ruo mpaghara ugwu, ebe ọ bụ na nke a ogige ahụ dị na La Guingueta, na Lleida Pyrenees ihe dị ka kilomita 30 site na Sort. Ogige a nwere bungalow nke ejikere nke ọma maka mmadụ isii. A na-enye kpo oku gburugburu ebe obibi, ihe dị mkpa n'oge oge oyi, nke na-abụkarị nnukwu oge na mpaghara a. A na-eji osisi rustic rụọ ụlọ ụlọ ahụ, nke nwere ụdị ugwu mara mma, nke na-eme ka ọ dị mma karị. Na mgbakwunye, n'ogige ahụ nwere ebe a na-egwu mmiri n'èzí, ebe a na-ere nri na ebe a na-ere nri. Na mpaghara ị nwere ike ịrụ ọrụ dị iche iche dị ka ụzọ ịgba ịnyịnya ugwu, ịgagharị ma ọ bụ ịgba ọsọ na oge.
Ogige Nautic Almata Glamping
Ogige a mara mma na nke oge a dị na Castelló d'Empúries n'akụkụ osimiri na obere mita ole na ole site n'ụsọ osimiri Sant Pere Pescador. Ulo ndi a bu ulo ntu ndi mara mma, sara mbara ma nwekwaa uzo di omimi nke nwere osimiri. N'ime ebe a, anyị nwere ike ibi ezigbo ebe anyị na-ama ụlọikwuu ma nwee nnukwu ihe eji enyere ndụ aka na ikuku. N'ime ụlọ ebe a, e nwere obere ebe kichin iji kwadebe nri. Ebumnuche nke ịmịkọta ọnụ bụ ikwesị ntụkwasị obi na ụdị ịma ụlọikwuu, jiri ụlọikwuu na ibi ndụ dị mfe karị, mana yana nnukwu ihe eji enyere ndụ aka nke na-eme ka ọnụnọ ahụ dịrị ezinụlọ na ndị enyi mfe.
Maa ụlọikwuu Prado Verde
Ogige a dị na Vilamòs, na mpaghara ugwu ebe enwere snow n'oge oge oyi. Anyị chọtara ebe ọzọ anyị na-ama ụlọ ebe e nwere nnukwu ụlọ obibi ugwu iji soro ezinụlọ anyị biri. Boollows nwere ụlọ ime ụlọ atọ ma nwee ikike kachasị elu nke mmadụ asatọ. Ha nwere ebe a na-ekpochapu ọkụ, ime ụlọ nwere sofa, na kichin zuru ezu. Enweghi ụkọ nke ihe eji enyere ndụ aka n'ogige a mara mma nke nwere ugwu ugwu. Ebe a na-ama ụlọikwuu na-enyekwa ụlọ oriri na ọ andụ restaurantụ na ebe a na-ere nri ebe ị nwere ike iri nri dị ụtọ na ọbụlagodi achịcha ọhụụ. Na mpụga, e nwere nnukwu ebe egwuregwu na ebe a na-anụ ahịhịa sara mbara ebe ị nwere ike iri nri n'èzí maka ezinụlọ gị dum. Na gburugburu ị nwere ike ịme ọrụ dị iche iche n'èzí dịka ịgagharị ma ọ bụ ịgba ígwè.
La Siesta Salou Resort & Ogige
Ihe mgbagwoju a bu nnukwu ulo oru emere maka ezin’ulo ya n’etiti ndi mmadu kachasi nma na Catalonia. O nwere ebe ntụrụndụ dị iche iche nwere ike dị iche iche, ọ bụ ezie na ọ ga-ekwe omume ịnọ n'ime ụlọ. Na A na-ahọpụta Bungalows nke ọma, ya na oche oche nwere sofa, kichin, ime ụlọ ịwụ na a teres ebe, niile mma na a oge a na mfe ịke. Ebe a na-enyekwa ezinụlọ dum ihe ntụrụndụ dị ukwuu, ebe ọ nwere ọdọ mmiri anọ, otu n'ime ha nwere ebe izu ike magburu onwe ya na ụgbọ mmiri na hydromassage. Na ọzọ enwere slide maka ọ theụ nke onye pere mpe n'ime ezinụlọ. Ogige ahụ nwekwara ọrụ ndị ọzọ na ụlọ oriri na ọ aụetụ a na-eri nri na nri mba ụwa, nnukwu ụlọ ahịa na ụlọ nri. Ọ dị na Salou, nke dị nso n'ụsọ osimiri ma nwee ihe ndị a niile maka ezumike ezumike na ezinụlọ gị dum.
Foto: Ntinye akwụkwọ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ogige 5 kachasị mma na Catalonia
Obodo ndị a gbahapụrụ